စီးပွားရေး ဒိုင်ယာရီ (Dec 17,2018) | မာသင်
စီးပွားရေး ဒိုင်ယာရီ (Dec 17,2018)
၁၈ ရာစု စက်မှုတော်လှန်ရေး ကစတင်ခဲ့ပြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတဲ့ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေနဲ့အတူ၊ စက်ရုံအုပ်ချုပ်မှု ပုံစံ ဆိုတာ စတင် ကျင့်သုံးလာကြပါတယ်။
စက်ရုံတစ်ရုံမှာ…. ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စည်းကမ်းလိုက်နာမှုဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ဖို့ နဲ့အလုပ်လုပ်ရာမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် နဲ့တိကျဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှလဲ စက်ရုံက အမှားနည်းပြီး ထွက်နုန်းကောင်းမယ်။ အမြတ်ရပါမယ်။
၂၁ရာစုမှာ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများနှင့်အတူ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုများ ကို အားပေးတဲ့ စတူဒီယို အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
စတူဒီယို တစ်ခုမှာ …ဖန်တီးမှု စိတ်ကူး၊ တာဝန်သိ တာဝန်ယူမှု စိတ်ဓတ်နဲ့လုပ်ကိုင်မှုဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ အထက်အောက်စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါးလွာလာပြီး Team စိတ်ဓတ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှု စိတ်ဓတ်ပဲ ကျန်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖန်တီးမှု ဆိုတာ အထက်ကခိုင်းလို့မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့အမြင်၊ ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုကို ခေါင်းဆောင်လိုစိတ် နဲ့အမှားခံနိုင်ပြီး အမှားလုပ်ခြင်းကို အားပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွင်းယဉ်ကျေးမှု ကို အုတ်မြစ်ချထားမှသာလုပ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စက်ရုံမှာ “Productivity” ဆိုတဲ့ “အလုပ်တွင်မှု” ကို အသားပေးပါတယ်။
စတူဒီယို မှာ “Humanity” ဆိုတဲ့ “လူသားဆန်မှု” ကို အသားပေးပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းခွင် နှစ်မျိုး ရှိတဲ့အနက် .. ….
သင် …. ဘယ်ဘာ လုပ်နေတာလဲ။
စက်ရုံ ထဲမှာလား ?